Warshada Laydhka Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Donghua
Qalabka inta badan loo isticmaalo codsiyada iftiiminta waa acrylic iyo polycarbonate. Xaashida loo yaqaan 'Acrylic plexiglass' iyo 'polycarbonate sheets' waa labadaba caagag adag oo waara oo leh fursado muuqaal oo xagga sare ah. DHUA badanaa waxay siisaa go'yaal akrilik ah dalabkaaga nalka.
Nidaamkayaga muraayadaha indhaha ayaa loo adeegsadaa sameynta Guddi Hagaha Nalka (LGP). LGP waa guddi khafiif ah oo loo yaqaan 'acrylic panel' oo laga sameeyay 100% Virgin PMMA. Isha iftiinka waxaa lagu rakibay cidhifyadeeda (s). Waxay ka dhigeysaa iftiinka ka imanaya isha iftiinka si siman dhammaan wejiga kore ee xaashida acrylic. Gudiga Tilmaamaha Iftiinka (LGP) waxaa loo sameeyay si qaas ah calaamadaha iftiinka iftiinka iftiinka iyo iftiinka, oo siinaya dhalaal aad u fiican iyo xitaa iftiin.